Dhuusa Mareeb oo isu diyaarineysa marti gelinta shirka Maamul u sameynta Mudug iyo Galgaduud (Sawirro) - iftineducation.com
Dhuusa Mareeb oo isu diyaarineysa marti gelinta shirka Maamul u sameynta Mudug iyo Galgaduud (Sawirro)
iftineducation.com – Magaalo madaxda gobolka Galgaduud ee Dhuusa Mareeb ayaa soo af-jartay qaban-qaabo ay maalmahan ugu jirtay marti-gelinta shirka Maamul u sameynta gobollada Mudug iyo Galgaduud.
Sidoo kale Dhuusa Mareeb ayaa kulansatay joogitaanka cutubyo ka tirsan ciidamada AMISOM ee ka socda Itoobiya, iyo ciidamo ka tirsan xooga dalka, iyadoo ay ku sugan yihiin Saraakiil ciidan iyo Mas’uuliyiin ka socda dowladda Soomaaliya.
Goobta uu Maamulka Galgaduud u diyaariyay in lagu qabto shirka maamul u sameynta ayaa ah xarun weyn, iyadoo hoolka ay u qorsheysteen in shirka ka furmo si aad ah loo xardhay, lana dhigay kuraasyo isugu jira kuwa casriga iyo kuwa caadi ah.
Maamulka Ximan iyo Xeeb ayaa hore u sheegay inay diyaariyeen gogoshii shirka lagu qaban lahaa oo laga hir-geliyey magaalada Cadaado, inkastoo horay loo sheegay in shirka lagu qabanayo Cadaado, hadana waxaa soo baxaya warar iska soo horjeeda.
Gudiga Farsamada ee Maamul u sameynta Gobollada Mudug iyo Galgaduud ayaa iyana si rasmi u magac dhabin halka lagu qaban doono shirka, waxaana laga yaabaa in caqabada ugu horeysa ee maamul u sameynta Gobolada Mudug iyo Galgaduud uu noqdo halka ay ka dhici doonto shirka, marka la iclaamiyo goobta loo qorsheeyay.
Heshiiskii maamul u sameynta Gobolada Dhexe ayaa ee lagu gaaray magaalada Muqdisho sanadkii hore ayaa dhigayay in gogosha Maamul u sameynta Gobolada Dhexe laga dhigo Cadaado.
Labada Magaalo ee Dhuusa Mareeb iyo Cadaado ayaa haatan loolan xoogan ugu jira marti gelinta shirka, waxaana ka kala socda qaban qaabo xoogan iyo diyaar garow.
Maamulka Gobolka Galgaduud ayaa sheegay inay magaalada Dhuusa-Mareeb ka hir-geliyeen Xarumo waa weyn oo ay sheegeen in gogosha shirka maamul u sameynta Mudug iyo Galgaduud ay taallo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa inuu maalmaha soo socda booqasho ku gaaro magaalada dhusamareeb ee xarunta Gobolka Galgaduud.
In ka badan 10-musharax ayaa ilaa iyo haatan isku soo sharaxay doorashada Madaxweynaha Maamulka Gobolada Dhexe, iyadoo aan wali la cayimin waqtiga la qabanayo shirka maamul u sameynta Gobolada Dhexe.
Dadka odorasa arrimaha Siyaasada ayaa sheegaya in caqabadaha wali ka taagan arrimaha maamul u sameynta Gobollada Dhexe ay sabab u tahay in wali beelaha wada dega gobolkaas aanay isku kalsooneyn, isla markaana aanay jirin dib u heshiisiin rasmi ah oo la kala dhex dhigay.
Sergio Aguero oo dhaawac ka soo laabtay diyaarna u ah kulanka Evertoon ee Sabtida